(tonga teto avy amin'ny Kenya)
Republic of Kenya ((en))
Jamhuri ya Kenya sw
Repoblikan'i Kenia ((mg))
Teny filamatra : Harambee
(Soahily : Andao hiara-miasa)
Teny ofisialy Soahily, anglisy
Tanàna lehibe indrindra Nairobi, Mombasa, Kisumu
- Rano (%) faha 48
- Tontaliny (2009)
- hakitroka faha 33
38 610 097 mpo.
Anaran'ny mponina Kenianina
IDH (2011) Endrika:Mitombo 0.509 (faible) faha 143
Sandam-bola Shilling kenianina (KES)
Hiram-pirenena Ee Mungu Nguvu Yetu
I Kenia na Repoblikan' i Kenia dia firenena any Afrika Atsinanana, manana morontsiraka ao amin' ny Ranomasimbe Indiana, izay misy nosy maro (miisa mihoatra ny 400), manana velaran-tany mirefy 580 367 km². Ny renivohiny dia i Nairobi. Atao hoe Kenya na Jamhuri ya Kenya i Kenia amin' ny teny soahily fa Kenya na Republic of Kenya kosa amin' ny teny anglisy.
Mierinerina eo fovoany ny tangorom-bohitra izay ahitana ny tendrombohitra Kenya izay avo indrindra ao (5 199 m). Ao andrefana no ahitana ny Rift Valley izay fitandaharan-kantsana lalina. Saika an' i Kenia manontolo ny farihy Turkana ary ao amin' ny tanin' i Kenia koa ny ampahan' ny farihy Victoria (izay farihy lehibe indrindra aty Afrika).
Betsaka bibidia ny ao Kenia, ka mampalaza azy izany, toy ny elefanta, ny antilôpa, ny zebra, ny jirafa, ny liona, ny bibilava sy androngo, ny vorona samihafa sns. Manana valan-javaboary sy tahirin-javaboary maro i Kenia izay mahatratra ny 10 %n' ny velaran-tanin' io firenena io, mba hiarovana ireo biby ireo.
Nisy mponina miisa 47 564 296 ny ao Kenia tamin' ny taona 2019. Karazam-bahoaka maro no mitambatra ho mponin' i Kenia, ka ny maro an' isa amin' izany dia ny Kikoio sy ny Masay. Ahitana vahoaka vitsy an'isa koa ao, toy ny Indiana, ny Eorôpeana, ny Arabo ary ny Somaly. Mpino kristiana ny ankabetsahan' ny Keniana, nefa ahitana mpanaraka ny fivavahan-drazana afrikana animista koa ao. Ny fiteny anglisy sy ny fiteny soahily no fiteny ôfisialy ao Kenia.
Mivelona amin' ny fambolena ny ankamaroan' ny Keniana. Mahaleo tena ara-tsakafo i Kenia raha amin' ny fambolena legioma, fary, mananasy, voanjo, vary, katsaka, sns. Mamboly voly fanondrana koa izy ireo ka ny lehibe amin' izany dia ny dite. Miompy koa ny Keniana, indrindra ny ondry sy ny omby ary ny osy. Mamokatra herin' aratra koa i Kenia ka ny goavana amin' izany dia ny ao amin' ny tohodranon' i Kiambare sy ny an' i Turkwell. Mandroso koa ny fizahàn-tany izay loharanon-karena lehibe ao amin' io firenan io.
I Wikimedia Commons dia manana aino aman-jery mikasika an'i : Kenya
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kenia&oldid=1040799"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:11 ity pejy ity.